Public Health in Myanmar: Virginity အပျို တကယ်စစ်ပါတယ်
ဒီ post နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ ကျွန်မမေးခွန်တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ပါ။
ကျွန်မ အမျိုးသားနဲ့ အိမ်ထောင်စကျကတည်းက ကျွန်မ ရဲ့အဂါင်္နားကတင်ပါးပေါ်မှ အနာလိုမျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဆရာ။
လိမ်းလိုက်ရင်ပျောက်သွားပေးမဲ့ နောက်တစ်လ ရာသီလခါနီးဆိုပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။အဖုသေးသေးလေးဖြစ်လာပီ။ဆေးမလိမ်းရင် ပွားလာပါတယ်။ယားလည်းယားပါတယ်ဆရာ။ကျွန်မ ကူးစက်ရောဂါ တစ်ခုခုများဖြစ်နေပါသလား။ဘယ်လိုဆေးမျိုးကုသုံးသင့်ပါသလဲ။။။ဆရာဝန် သွားပြလည်း လိမ်းဆေးပဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ကျေးဇူးပြုပီ ဖြေပါပါနော်။
အနာနေရာ ပြောပြတာ တမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အင်္ဂါနားဆိုရင် ပေါင်ခြံဖြစ်မှာပေါ့။ တင်ပါးဆိုရင် နောက်ဖက်ကို ပြောတာ။ လိမ်းရတဲ့ဆေးက ဘယ်လို ဆေးလဲ။ ဘယ်လောက် ကြာသွားပြီလဲ။ အနာပုံစံကကော နီသလား၊ ဖေါင်းနေသလား။ ယားနာ၊ ပွေး၊ ပွါးတယ်ဆိုတာ တခုပြီးတခု ထွက်တာလား၊ ကျယ်ပြန့် လာတာလား။ ကူးစက်ရောဂါ တခုခုကတော့ ဟုတ်နိုင်တယ်။ STD ဟုတ်-မဟုတ် မပြောနိုင်သေးဘူး။ ခင်ပွန်းမှာကော အဲလိုနေရာ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာဖြစ်သေးလဲ။
ယောက်ကျားမရှိတော.ပဲ နဲ. လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိတော.တဲ. သူတွေဟာ မိန်းမအင်ဂါ အပျိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားဆရာ
အနာက စထွက်လာရင်နီနီသေးသေးလေးပါဆရာ။.ဆေးမလိမ်းရင်တော့ အကွက်အကွက်တွေဖြစ်ပီ.ပွားလာပါတယ်။ဆေးက antifungal,antibacteria ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့.
Sigmadam ပါဆရာ။။ကျွန်မက ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုသိပ်မပြောတတ်လို့ပါ။ခုလိုပြန်ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pelvis floor exercise အကြောင်းသိချင်ပါတယ်ဆရာ ။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာ အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါ ဆရာ။
တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် ဆရာ၊ပထမဆုံး ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာလက္ခဏတွေပြလဲ ဆရာ။
ပြီးတော့ ရာသီပေါ်ချိန်မှာ မပေါ်ပဲ ၁၅ ရက်လောက်နောက်ကျရင် ရော ကိုယ်ဝန်ရှိတာလား ဆရာ?တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိ တယ် ဆိုရင်ရော ရိုးရိုးဆရာဝန် နဲ့ ပြရင်သိနိုင်ပါသလား ဆရာ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇ဝ-၈၅% ဖြစ်တတ်။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း၊ အစာအိမ်ပြဿနာပေးခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ မကြာခဏ ဆီးသွားခြင်း၊ မောပမ်းခြင်း၊ သွေးအနည်းငယ် ဆင်းခြင်း၊ ယခင်ကထက် အားအင်ပြည့်၊ အလေးချိန် တိုးလာမည်။ အနေအထိုင် ခက်ခဲလာမည်။ အရေပြား ပြောင်းလဲမှုများရှိမည်၊ သွင်ပြင် လက္ခဏာများ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ပြောင်းလာသည်။
အပျိုတကယ်စစ်ပါတယ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ သမီးတို့ မသိသေးတာတွေတောင်ပါလို့ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ လူပျိုတကယ်စစ်ပါတယ် ဆိုတာလဲ ဖတ်ချင်ပါတယ် ဆရာ။ လူပျို စစ် မစစ်ကရော ဘယ်လို သိနိုင်လဲ ဖြေပေးပါနော်။
Morning sickness အကြောင်းရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဆရာ။ကျွန်မက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်း မသိတော့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ကစားလိုက်တာ ကိုယ်ဝန်ပျက်သလို ဖြစ်သွားတယ် ဆရာ။ဒါနဲ့ ဆေးခန်း သွားတော့ ဆရာဝန်က ကိုယ်ဝန်က ၁လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပြောပြီး ဆေး ၃ လုံးသောက်ခိုင်းတယ်။နောက်တစ်နာရီကြာတော့ Vacuum aspiration ခေါ်မလားပဲ လေဟာနယ်နည်း သုံးလိုက်တယ် ထင်တယ်။အချိန်က ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။နောက်တစ်ပတ် ပြန်လာဖို့ လည်း ရက်ချိန်း ပေးလိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ အမျိုးသားက Oversea သွားရတယ်။ခုထိ ဆေးခန်းမသွားဖြစ်သေးဘူး။ကျွန်မကလည်း သူများနိုင်ငံ မှာနေတာဆိုတော့ Taxi ကို နေရာပြောပြပြီး မငှားတက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါ အန္တရာယ်ရှိ နိုင်လား ဆရာ။နောက်ထပ် ကလေးယူမယ်ဆိုရင်ရော ဘာ effect တွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆရာ။ဆေးခန်းက ပေးလိုက်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးကတော့ အကုန်သောက်ပြီးပြီ ဆရာ။ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သားအိမ်ရှိတဲ့ နေရာက နာတယ်လို ခံစားနေရလို့ အန္တရာယ်များ ရှိနိုင်လား ဆရာ။ပြီးတော့ Vacuum Aspiration နည်းသုံးလိုက်လို့ 
သားအိမ်ကရော အရင်လို မဟုတ်တော့ပဲ ပျက်ယွင်းသွားပြီလား ဆရာ။
Vacuum aspiration နည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်-ရှင်းနည်းက စိတ်ချရပါတယ်။ သားအိမ်ကို မထိခိုက်စေတတ်ပါ။ နောက်ကလေးယူလဲ ဖြစ်တယ်။ ကောင်းတာက ကိုယ်ဝန် ချက်ချင်း ဆက်မယူသင့်သေးပါ။ Follow up ခေါ်တာက သားအိမ်အခြေအနေကို ပြန်စစ်ဘို့ပါ။ နောက်ဆိုရင် သတိထားပေါ့။
ဆရာ အဖြေကိုကြားရမှပဲ စိတ်အေးတော့တယ်။ကလေးကတော့ နောက်တစ်နှစ် လောက်နေမှ ယူတော့မယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ဖို့ သင်ခန်းစာ ကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်။ခုလို မအားတဲ့ ကြားက ပြန်ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာ။
ဆရာရှင့် -မနေ့ က ကျွန်မ ဆေးခန်းမှာ သားအိမ်ကို ပြန်စစ်ပါတယ်။ကျွန်မပြတဲ့ ဆရာဝန်က အားလုံး normal လို့ ပြောပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ထဲ ဘဝင်မကျဖြစ်မိတာက ခုရက်ပိုင်း အဖြူတွေ အရမ်းဆင်းနေတာပါ။ပုံမှန်လိုမဟုတ်ပဲ အဖြူရောင် အဖတ်တွေပါပြီး vagina ကလည်း irritation သဘောမျိုးခံစားနေရပါတယ်။ဆီးလမ်းကြောင်းများ ပိုးဝင်သလားမေးကြည့်တော့လည်းအားလုံး normal ပဲပြောနေပါတယ်။ဒါနဲ့ မြန်မာဆရာဝန် စုံစမ်းတော့လည်း ဒီမှာ OG ဆရာဝန်က မရှိဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။အဲဒါ ဘာရောဂါများဖြစ်နိုင်မလဲ ဆရာ။ဘာဆေးတွေများ သောက်သင့်သလဲ ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါအုံးနော်။
To nay said...
ပိုးဝင်နေတာ ဟုတ်ပါမယ်။ Leucorrhoea, Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း၊ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၅) ကိုဖတ်ပါ။ အဲဒီထဲက တခုခုနဲ့ တူနေရင် ညွှန်းတဲ့ဆေး သောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် Vaginal tablet ထည့်ပါ။ ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ၁ ပါတ် မကြာပါ။ လိုရင် Email နဲ့ တိုက်ရိုက် မေးပါ။
To ပွင့်ဖတ်ဖြူလေး လာတော့မယ်၊ မကြာဘူး
ဆရာရှင့် - ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှာ နေပါတယ်။သွေးဝမ်းသွားနေတာ နှစ်ရက်လောက်ရှိနေပြီ။ဘာရောဂါများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?ဘယ်လိုဆရာဝန် နဲ့ ပြသင့်ပါသလဲရှင်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါအုံးနော်။
သွေးဝမ်းသွားတာက ၀မ်းကိုက်တာလား၊ လိပ်ခေါင်းလား။ ၀မ်းကိုက်ရင် ဗိုက်ရစ်နာပြီး ခဏခဏသွားမယ်။ Septrin = (Trimethoprim 160 mg and Sulfamethoxazole 800 mg) တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃-၄ ရက်သောက်ပါ။ မရမှ Metronidazole ၁ ပြား ၃ ကြိမ် သောက်ပါ။
နောင်ကို တိုက်ရိုက် အီးမေးလ် နဲ့ မေးစေချင်တယ်။
ဆရာ မရှင်းတာ တစ်ခုမေးချင်လို့ ပါ ခင်ဗျာ သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့် ချစ်သူ နှစ်ယောက် တစ်ခါထက်မက ဆက်ဆံခဲ့ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ပထမ တစ်ခါမှာ ဘယ်လို မှ ကိုကြိုးစားလို့ မရခဲ့ ပါဘူး သူ့ရဲ့ အဂ်ါက စိုစွတ်နေပေမဲ့ လည်း လုံးဝ ကိုယောက်ျားလေး လိင်တံ ထိုးသွင့်းလို့ မရအောင် သူက နာနေပါတယ် ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်3ခါလောက် ဒါပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး ဒုတိယ တစ်ခါလည်း အဖေါ်နဲ့ဆို အဖေါ်မှာ ချောဆီပါလို့လွယ်မယ်ထင်ခဲ့ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ ပထမ တစ်ခါလိုဘဲ သူကအရမ်းနာလို့ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး ဒါပေမဲ့ သွားတိုင်းမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ကို လက်နဲ့ ထိုးသွင်းပြီး စိတ်ကိုဆွပေးခဲ့ ပါတယ် ဒါပေမဲ့သူက သွေးမထွက်တာ အပျိုမစစ်လို့ လား ဆရာ တစ်ကယ်လို အပျိုမစစ်ရင် ဘာလို့ ဒီလောက်နာနေရတာလဲ မသိဘူး? ပထမ လက်တစ်ချောင်းတည်း နဲ့ ဆွပေးပြီး နောက်ပိုင်း လက်နှစ်ချောင်းမရ ရအောင်ထိုးပြီးဆွပေးခဲ့ ဘူးပါတယ် အဲလို ဆွပေးပြီးနောက်ပိုင်းသူနဲ့ ဆက်ဆံလို့ ရသွားပါတယ် ကျွန်တော်သိချင်တာ သူက အပျိုစစ် လား ဆရာ သူက စစ လက်နဲ့ ထိုးသွင်းသွင်းခြင်း သွေးမထွက်ဘူး အရင် post တွေမှာ မိန်းမ အဂ်ါက လက်တစ်ချောင်းက ပိုမဆံဘူး ဆိုတာ စစ ပိုင်းတော့ ဟုတ်ပါတယ် နောက်ပိုင်းရော သူက အပျိုစစ်လား ဆရာ သိချင်းလို့ပါဆရာ
ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ကျွန်တော့်ဆီ တိုက်ရိုက် (အီးမေးလ်) နဲ့ မေးရင် ပိုကောင်းပါမယ်။ တိုက်ရိုက်ဖြေပေးပါမယ်။
ကျွန်မ Roll on သုံးတာနဲ့ ပက်သက် ပြီး တော့ နဲ နဲ မေး ချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ၇ တန်း အရွယ်က နေ သုံးလာ တာ ခု ဆို တတိယ နှစ် ရှိပါပြီ။ ခု ချိုင်း မှာ အကျိတ် လုံး လေး တွေ လို တွေ့ပြီး နာ ပါတယ် ။ အဲ့ ဒါ ဘာ ကြောင့် လဲ ။ ဂျိုင်းလိမ်းဆီတွေ သုံးလို့ လား ။ အန္တရယ်ဖြစ်နိုင်လား ။ ကျေးဇူး ပြု ၍ ဖြေပေး ပါအုံး နော် ။
Roll-on ဆိုတာ ဒီစာနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Ezio Vito said...
အပျိုစစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ post ကိုဘယ်မှာဖတ်ရမလဲမသိဘူး။ရှာမတွေ့လို့ပါ။
ကျွန်တော်တော့ မေးခွန်းကို နားမလည်ပါ။ အထက်ကစာ မဟုတ်တာပြောချင်တာလား။
ဆ၇ာ ၇ာသီလာချိနိမှာအပူအစပ် လက်ဖက် နောက်ဖန်ခါးသောအသီးတွေက ချုပ်စေတယ် နောက်ခေါင်းလျှော်တာတွေက ၇ာသီ၇က်မမှန်စေတာဟုတ်ပါသလားဆ၇ာ ၇ာသီလာချိန်ဒိန်ချဉ်သောက်တာ အကျိုသက်ေ၇ာက်မှု၇ှိလားဆ၇ာ နောက်မိန်းကလေးသားအိမ် ကိုအကျိုပြုအထောက်အကူပေးမဲ အစားအသောက်လေးတွေပြောပြပေးပါဆ၇ာ
phyu lay said...
ဆရာရှင့် သမီးအရမ်းသိချင်သာလေးမေးပါရစေ သမီးရာသီ လာခါနီး အဖြူဆင်းစင်း တဲ့အချိန်မှာ မလိုင်ဖတ်လိုအဖြူ ဖတ်တွေ ဖြစ် ပြီး ယားယံမှုတွေ ဖြစ်လာပါသည် အဲဒါက ရောဂါပိုးကြောင့်ပါလား ဆရာ သမီး က အပျို ဖြစ်ပင်မဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီလို ဖြစ်ကသာပါလဲဆရာ...?
ဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော် ဒီpostနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး ယောကျာ်းလေးလိင်အင်္ဂါကြီးချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆရာ ကျွန်တော့မှာအခက်အခဲရှိနေလို့ပါ ပျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော်
ကျ‌နော့်‌ချစ်‌သူကအပျိုမစစ်‌ပါဘူးဆရာ အဲဒါဘာမဖြစ်‌ပါဘူးကျ‌နော်‌တို့အကုန်‌နားလည်‌မှုရှိပါတယ်‌ သူနဲ့လိင်‌ဆက်‌ဆံတဲ့အခါတိုင်း သူ့အရည်‌‌တွေနဲနဲထွက်‌ရင်‌ထွက်‌သ‌လောက်‌နံပါတယ်‌ဆရာ အနံ့က‌တော်‌‌တော်‌ဆိုးပါတယ်‌အဲ့ဒါဘယ်‌လို‌ပျောက်‌‌အောင်‌လုပ်‌ရမလဲဆရာ
Bo Ma said...